Qorshaha E-Barashada Dugsiga Sare ee Minnetonka | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Gudoomiyuhu wuxuu u ogolaanayaa shaqsiyan wax barasho shuruud la badalay oo ku saabsan fogeynta bulshada iyo iyadoo aan la xadidneyn isticmaalka 50% ama ka yar awoodaha fasalka ee ardayda da'da dugsiga hoose.
Ardayda waxaa lasiin doonaa fursado keliya oo ah barashada elektarooniga ah illaa iyo inta iyaga ama waalidkood ay dooranayaan ikhtiyaarka sannadkan.
Soo Degso Buugga Ciyaaraha / Waalidka ee MHS
Arag tusaalaha tilmaamaha hadda jira Websaydhka
Faahfaahin Qaabka Tilmaamaha Hadda
Macluumaadka Imtixaanka AP / IB
Kala badh ardayda ayaa dhigan doonta dugsiga laba maalmood usbuucii, badhkood waxay dhigan doonaan laba maalmood oo kale. Saddexda maalmood ee ardaydu shakhsi ahaan ma noqon doonaan maalmo e-barasho oo leh tilmaamo gaar ah iyo MAST Arbacada. Faahfaahin qaasa waxaa ardayda u soo diri doona Maamulaha Dugsiga Sare. Kala fogeynta bulshada ee lix cagood, fasallada waxaa lagu ilaalin doonaa 50% waxaana wejiga loo dabooli doonaa looga baahan yahay Dugsiga Sare. Ardayda dugsiga sare ee elektaroonigga ah waxay kaliya raaci doonaan jadwalka maalinlaha ah waxayna geli doonaan fadhiyada ay ku kulmaan ee google oo ay weheliyaan ardayda isku dhafan ee aan ku jirin dugsiga maalmaha loogu talagalay. Kala fogeynta bulshada ee basaska ardayda dugsiga sare ayaa sii wadi doonta in loo baahdo.
Waxaa loogu tala galay in dugsiga sare uu u wareego waxbarid shaqsiyeed bisha Maarso 15, haddii uu u oggolaado Badhasaabka waqtigaas. Ansixinta kama dambaysta ah ee qaybtaas qorshaha ayaa la filayaa dhammaadka Febraayo ama horraanta Maarso.
Jadwalka ardayda waxaa laga heli doonaa Skyward kahor dhammaadka simistarka koowaad. Ardayda isku dhafka ah waa inay hubiyaan inay dib u eegaan shaqadooda fasalka intaanay imaan dugsiga markay tahay 1/29 iyo 1/29.
Soo Degso Dulmarka Jadwalka (pdf)
Soo Degso Jadwalka Billaha ah (pdf)
Dugsiga Sare ee Minnetonka, waxaan ku dadaalnaa inaan ka caawinno arday kasta inuu gaaro guul waxbarasho iyadoo loo marayo barnaamijyo iyo ilo kala duwan. Arday badan ayaa ka faa'iideysta caawinaad dheeri ah fasalka waxayna badanaaba si fiican u bartaan iyagoo la shaqeynaya asaaggooda. Anchors-ka tacliinta ee MHS (macallimiinta isku faca ah) ayaa fursad u ah ardayda inay helaan umeerin bilaash ah, shaqooyin dhameystiran, hagaajinta caadooyinka waxbarashada, iyo inay si iskaashi leh ula shaqeeyaan asxaabtooda jawi qaabeysan oo taageero leh. Anchors-ka tacliinta waa ardayda ku jirta fasalada 10-12 kuwaasoo lagu xushay codsi iyo habka tala bixinta. Ardaydu waxay fursadan ku heli doonaan inta udhaxeysa Google iyo inta lagu jiro Arbacada Skipper. Fadlan dhagsii xariijinta 'hyperlink' si aad u hesho macluumaad dheeraad ah si aad u Weydiisato Barro - Anchors Tacliin (oo sidoo kale lagu dhejiyay bogga Kooxda Wax Barashada Ardayda). Anchor Tacliinta ayaa markaa si toos ah ula xiriiri doonta ardayga emayl ama taleefan si loo dejiyo waqti lagu kulmo. Ardaydu waxay codsan karaan macallin hal-mar ah ama macalin socda.
Taageero kale oo weyn waa Xarunta Qorista MHS. Xarunta Qoraalku waxay u furan tahay barashada isku dhafan! Waxaa ka shaqeeya laba macallin oo Ingiriis ah iyo 40 tababarayaal qorista ardayda ah, Xarunta Qorista waxay u furan tahay dhammaan ardayda MHS. Waxaan ardayda kala shaqeynaa 1: 1 mashruuc kasta oo qoris ah, marxalad kasta oo horumar ah, tababarid adigoo weydiinaya su'aalo, soo jeedin xeelado, iyo ka caawinta qorayaasha inay caddeeyaan fikradaha. Dhammaan qorayaashu waxay ka faa'iideystaan la wadaagga shaqada hawsha horumarka leh akhristayaasha aqoonta leh, ee u fiirsanaya.
Balanqaadyo isku mid ah oo isku mid ah iyo kuwo isku mid ah ayaa la heli karaa Isniinta illaa Jimcaha ballamaha shaqsi ahaaneedna waxaa la heli karaa Arbacada. Saxiix u sameyso ballan adoo adeegsanaya barnaamijkeena Onboard. Si aad ballan u samaysato, hubi sida ugu dhakhsaha badan ama tilmaamaha oo faahfaahsan. Macluumaad intaas ka badan ka fiiri kooxda cilmiga ee Xarunta Qoraalka, ama la xiriir Shannon Puechner ( shannon.puechner@minnetonkaschools.org ) ama Krista Hitchcock ( krista.hitchcock@minnetonkaschools.org ) su'aalo.
Sida loola xiriiro Lataliyahaaga
Inta lagu jiro xiritaanka iskuulka, lataliyayaasha ardayda waxaa lagula xiriiri karaa emayl, Google Meet, ama Google Voice. Macluumaadkooda waxay ku qoran yihiin hoos:
Magaca Kulan Google Hangout
Lambarka Codka Google
La taliyayaasha kale iyo Taageerada
AP / IB Lataliyaha
Websaydhka La-talinta MHS
Taageerada farsamada ayaa loo heli karaa ardayda inta lagu jiro maalinta iskuulka laga bilaabo 7: 30-4. Ardaydu waxay emayl u diri karaan mhs.media@minnetonkaschools.org , wac 952-401-5860, ama Schoology Message The Port oo waxay filayaan jawaab deg deg ah oo ku saabsan arrintooda. Saacadaha kadib farriimaha si dhakhso leh ayaa loo soo celin doonaa bilowga maalinta ku xigta.
Dukumentiyada Taageerada Tech sidoo kale waxaa laga heli karaa iyada oo loo marayo barnaamijka loo yaqaan 'Port App' ee dhammaan ardayda iPad-yada ah. Barnaamijkani wuxuu isku xiraa ardayda si uu uga caawiyo dukumiintiyada, tilmaamaha ku saabsan sida loo xaliyo arrimaha guud, iyo xusuusinta galitaanka barnaamijyada aadka loo isticmaalo.
Dabeecadda jawiga aan hadda ku jirno awgeed, waxaan soo jeedinaynaa geeddi-socodka soo socda ee ku soo noqoshada degdegga ah.
Ipad-ka si toos ah ugu qaado Smart Fix kadib markaad buuxiso foomka. Tani waa adeeg bilaash ah waxayna bixisaa hal maalin oo soo noqosho ah. Macluumaadka ku saabsan Smart Fix ayaa laga heli karaa halkan
Soo noqoshada degdega awgood, kuma siinayno iPad deyn bixiye ah inaad adeegsato inta aad sugayso inta qalabkaaga laga dayactirayo Smart Fix.
Beddel ahaan waxaad ku ridi kartaa MHS miiska hore waxaanan ku siin karnaa beddelaad. Waqtiga soo celinta ee ka tagaya MHS waa ugu yaraan shan maalmood. Fadlan emayl ugu soo dir mhs.media@minnetonkaschools.org si aad u ogeysiiso Dekedda inaad imaaneyso.
Haddii helitaanka wifi ay tahay arrin, fadlan la xiriir la-taliyaha ardaygaaga si aad u raacdo xulashooyinka.
Markaan horay u socono, qoysaska waa inay qorsheeyaan inay ku soo wargeliyaan maqnaanshaha iyagoo adeegsanaya Skyward Family Access. Tilmaamo faahfaahsan ayaa laga heli karaa xiriiriyahan . Inta uu xiran yahay iskuulka iyo inta aan ku bixinayno waxbarista elektaroonigga ah, maqnaanshaha waxaa sii wadi doona inay la socdaan Xafiiska Arimaha Ardayda.
Taageero kale oo weyn waa Xarunta Qorista MHS . Xarunta Qoraalku waxay u furan tahay barashada isku dhafan! Waxaa ka shaqeeya laba macallin oo Ingiriis ah iyo 40 tababarayaal qorista ardayda ah, Xarunta Qorista waxay u furan tahay dhammaan ardayda MHS. Ardaydu waxay helayaan warcelin ku saabsan qorista nooc kasta, dhammaan maadooyinka, iyo marxalad kasta oo ay tahay habka qorista, min fikirka maskaxda ilaa dib u eegista ugu dambeysa. Dhammaan qorayaashu waxay ka faa'iideystaan la wadaagga shaqada hawsha horumarka leh akhristayaasha aqoonta leh, ee u fiirsanaya. Waxaan ardayda kala shaqeynaa 1: 1 mashruuc kasta oo qoris ah, marxalad kasta oo horumar ah, tababarid adigoo weydiinaya su'aalo, soo jeedin xeelado, iyo ka caawinta qorayaasha inay caddeeyaan fikradaha.
Jadwalka Socodka-iyo Ballamada
Balanqaadyo isku mid ah oo isku mid ah iyo kuwo isku mid ah ayaa la heli karaa Isniinta illaa Jimcaha ballamaha shaqsi ahaaneedna waxaa la heli karaa Arbacada. Saxiix u sameyso ballan adoo adeegsanaya barnaamijkeena OnBoard .
Si aad ballan u samaysato, hubi sida ugu dhakhsaha badan ama tilmaamaha oo faahfaahsan .
Imtixaannada AP waxaa hadda loo qorsheeyay May 3-14 waxayna dabooli doonaan baaxadda koorsada iyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Haddii dhismayaasha dugsiyadeennu u xirnaadaan bisha Maajo 2021 sababo xagga nabadgelyada ah awgood, Barnaamijka AP wuxuu bixin doonaa xulasho deg deg ah oo loogu talagalay imtixaanka AP AP. Waxaan rajeyneynaa inaan waxbadan ka ogaanno tan horaanta 2021. Ka eeg bogga MHS AP wixii cusbooneysiin dheeraad ah
Bisha May 2021 imtixaanada IB ayaa hada loo qorsheeyay Abril 29-May 20, IB wuxuu sameeyay xoogaa hagaajin ah si loo qiimeeyo shuruudaha iyadoo laga jawaabayo waqtiga waxbarida oo yaraaday. Haddii dhismayaasha dugsiyadeennu u xirmaan Maajo 2021 sababo xagga nabadgelyada awgood, IB Organization waxay bixin doontaa xulasho deg deg ah oo loogu talagalay imtixaanka IB. Waxaan rajeyneynaa inaan waxbadan ka ogaanno tan horaanta 2021. Ka eeg bogga MHS IB wixii cusbooneysiin dheeraad ah
Su'aalaha Badanaa La Weydiiyo Qoysaska MHS
Dugsiga Sare ee Minnetonka wuxuu halkan u joogaa inuu ku caawiyo haddii aad dhibaato kala kulantid barashada elektarooniga ah. Fadlan dib u eeg su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee hoose, kuwaas oo ka jawaabaya inta badan su'aalahaaga.
Maxaa dhacaya rubuca 4aad?
Maxay yihiin taariikhaha muhiimka ah?
Haddii aan u doortay hal ikhtiyaar ardaygeyga laakiin markii dambe aan maskaxdayda beddelo, ardaygayga ma loo oggolaan doonaa inuu beddelo?
Haddii aan jeclahay qaabka isku-dhafan ee hadda jira laakiin kuma raaxeysan doono waqtiga-buuxa ee qofka-dookh ahaan, miyaan ku sii socon karnaa jadwalkayaga isku-dhafan ee hadda jira?
Qaabka shaqsiyan oo buuxa, ma yeelan doontaa jadwal xannibaad ama lix maalmood maalin?
Ka warran Arbacada? Miyay sii ahaan doonaan maalmo MAST / e-waxbarasho dhammaan ardayda ah?
Waa maxay borotokoollada badbaadada ka hortagga COVID ee ka jiri doona MHS?
Maxay kala fogaynta bulshada dheeri ah iyo tallaabooyinka nabadgelyada ee COVID ay la socon doonaan qaabka qof ahaaneed oo dhammaystiran?
Qaybaha elektaroonigga ah ee su'aalaha la iska waydiiyo
Ardaydu waxay xaadiri doonaan fasalo afar maalmood usbuucii kadib maalinta lixda-maalmood (ama qof ahaan ama si muuqata) laga bilaabo Talaadada, Abriil 6. (Toddobaadkan ma lahaan doono jadwalka Arbacada MAST.)
Maarso 1 & 2 - Kooxo a
3 & 4 Maarso - Kooxo b
Maarso 3 - Waqtiga ugu dambeeya ee go'aanka qaabka waxbarashada
Shaqsi ahaan ama e-waxbarasho - xulashadaada ku samee cirka
Shirarka Maarso 4 & 5
Khamiis, Maarso 4 (4-8 pm) & Jimco, Maarso 5 (9-12 pm)
Dugsi malaha Jimcaha, Maarso 5
Maarso 8 - Kooxo a
Maarso 9 - Kooxo b
Maarso 10 - Maalinta taageerada ficil ahaaneed, ma jiro fasal shaqsiyeed
Maarso 11 & 12 - Qorshaynta macalinka / maalmaha kala guurka - hubi cilmiga cilmiga
Maarso 15 - Qof ahaan buuxda koox ahaan a & b
Taariikhda ay bilaabayaan q3 bartayaasha isku dhafan ee u wareegaya e-learning
Maarso 29-Abriil 2 - Dugsi ma leh, fasaxa guga
Abriil 5 - Ma jiro iskuul, maalin qiimeyn iyo qorsheyn
Abriil 6 - Gr 9-11 ayaa bilaabanaya rubuc 4 - ma lahan iskuul dadka waayeelka ah
Taariikhda bilawga e-bartayaasha q3 e-guurka shaqsi ahaan
Abriil 7 - Fasallada Gr 9-12 ayaa dib u bilaabmay, shaqsi ahaan ama e-waxbarasho
Xusuusin: Qaabka barashada wuxuu kuxiranyahay go aanka qaabka go aan qaadashada
Abriil 26 - Maalinta bilowga dambe
Sida ku xusan xeerarkayaga hadda jira, haddii aad doorato inaad u guurto e-learning, waad sameyn kartaa sidaas wakhti kasta. Si loo waafajiyo jadwalka, barashada elektaroonigga ah waxay macnaheedu noqon kartaa in ardaygaagu uu ku sii qulqulayo fasallada uu hadda dhigto. Ma jiro jadwal ama macallinka oo la beddelo.
Haddii aad dooratid inaad uga wareejiso ardaygaaga e-learning-ka shaqsi ahaan, waxaad ku sameyn kartaa tan xilliga nasashada.
Maya. Ikhtiyaaraadkaaga waxbarasho ee ikhtiyaariga ah ee ka bilaabanaya Maarso 15 waxay noqon doontaa mid wax ku baranaya qof ahaan ama waxbarasho dhammaystiran oo elektaroonig ah. Qaabka isku dhafka ahi mar dambe ikhtiyaar u noqon maayo, sida macquulka ah uma wada bixin karno isugeyn iyo qof ahaaneed isku mar isla waqtigaas. Ardaydu shaqsi ahaan bey u yihiin ama khadka tooska ah. Ma awoodi karno inay ardaydu doortaan saacado / fasalo gaar ah oo qof ahaan ah.
Waxaan sii wadi doonnaa inaan ku haysano MHS maalin lix maalmood ah.
Si loo waafajiyo taageerada dheeraadka ah ee ardayda iyo faragelinta iyo waqtiga u diyaargarowga macallimiinta ee gobolka loo xilsaaray, Arbacada waxay ahaan doontaa MAST, Wax ka qabadka Tacliinta iyo taageerada guud ee dhammaan.
Waxaan sii haysan doonnaa tallaabooyinka amniga ee soo socda (oo leh hagaajinno la xusay):
Daboolida wajiga ayaa looga baahnaan doonaa degmada wajigeeda siyaasad daboosho. Waxaan qaadaneynaa heerkulka ardayda kahor iskuulka.
Ardaydu waxay fadhiisan doonaan wax aan ka yarayn 3 fiit maqaayadda iyada oo kuraas loo qoondeeyey. Ardaydu waxay ilaalin doonaan masaafada 3 fuudh ee fasallada. Macalimiintu waxay ilaalin doonaan 6 fuudh masaafada ardayda intii suurtogal ah. Marka masaafadaas aan la sii wadi karin, waxaa la isticmaali karaa qeybiyeyaal plexiglass cad ah.
Barashada Jirka iyo Muusigga / Koorsooyinka waxay joogteyn doonaan 6 fuudh oo fogaan ah waxaana laga filayaa ardayda inay xirtaan waji-duub.
Fadlan la soco talaabooyinka badbaadada ee soo socda ee la dhigi doono sida ay ku taliyeen Waaxaha Caafimaadka ee Minnesota. Ardayda waa in horey looga sii baaro jirro (qandho, calaamado kale, soo-gaadhis qof u baadhay cudurka) ka hor imaanshaha dugsiga maalin kasta. In kasta oo aan u yareyneyno farqiga u dhexeeya bulshada ee u dhexeeya ardayda illaa seddex cagood oo loo baahan yahay, kani ma beddelayo raadinta xiriirkeenna ama qeexitaanka xiriir dhow. Xiriirka dhow wali waxaa lagu qeexay inuu yahay lix fuudh 15 daqiiqo ama ka badan.
Shaqaalaha iskuulka iyo dadka kale ee qaangaarka ah ee dhismaha ku jira waxay ilaalin doonaan lix fuudh oo masaafad jireed ah oo u dhexeeya ardayda iyo midba midka kale (mar kasta oo ay suurta gal tahay). Daboolka wajiga ayaa marwalba xiran doona shaqaalaha iyo ardayda inta ay wada joogaan gudaha, xitaa inta lagu jiro xiisadaha barashada jimicsiga.
Fadlan sii wad inaad la socodsiiso shaqaalaha xafiiska caafimaadka jirrada ku haysa ardaygaaga, oo ay ku jiraan haddii ardayga ama xubin kasta oo qoyska ka mid ah ay ka baaraan cudurka 'COVID' ama haddii ardaygaagu u baahan yahay inuu karantiil noqdo sababta oo ah xiriir dhow oo uu la leeyahay qof tijaabiyey cudurka.
Baska dhexdiisa, waxaa jiri doona masaafo dhan 6 fuudh wadaha iyo ardayda. Ardayda waa lakala fogaan doonaa inta baska lajoogo sida ugu macquulsan waxaana lasiin doonaa kuraas. Intaa waxaa dheer, cunida iyo cabitaanka looma oggolaan doono baska. Maaskarada ayaa loo baahan doonaa.
Marka shaqaalaha ku jira fasalka ama meelaha shaqsiyeed aysan ilaalin karin lix fiit oo ka fog ardayda (koox yar ama waxbarid shaqsiyeed), carqaladaha cad ee loo yaqaan 'plexiglass car waxaa loo isticmaali karaa ardayda iyo dadka waaweyn, mar kasta oo ay suurta gal tahay; si kastaba ha noqotee, isticmaalkoodu saameyn kuma yeesho soo-gaadhista / karantiilka laakiin waxaan rajaynaynaa inuu yareeyo gudbinta.
Haa. Macalimiintu waxay galayaan xaadiritaanka ardayda Skyward. Ardayda waxaa lagu calaamadeyn doonaa inay goobjoog ahaan uqeexan doonaan Schoology waqtiga jadwalka fasalka, iyo inay si firfircoon ugaqayb galaan macallinka ama koorsooyinka udub-dhexaadka u ah waxbarashada.
Haa. Waxaa jira jadwal maalinle ah oo leh 6 fasal maalintii. Inta lagu jiro waqtigan, waxaa jiri doona isdhexgalka macallinka / fasalka iyada oo loo marayo Google Buuxiyo.
Ardayda waxaa laga filayaa inay ku jiraan fasalka inta xilli kasta la qaadanayo. Macalimiintu waxay u soo gudbin doonaan waxyaabaha laga filayo casharka e-bartayaasha maalin kasta.
Ardaydu ma iska xaadirin karaan fasalada wixii ka dambeeya 3:00 galabnimo?
Haa, laakiin ardayga ayaa loo calaamadin doonaa maqnaanshaha maalinta dugsigaas. Haddii arday jiran yahay oo uusan dhammaysan karin shaqada koorsada, ardaygaas waa inuu waalidkood ku soo gudbiyaa codsi maqnaansho iyadoo loo marayo Skyward.
Ardayda waxaa looga baahan yahay inay iska hubiyaan fasalkooda koowaad iyagoo adeegsanaya Schoology ka hor 8:30 subaxnimo maalin kasta. Ardaydu waxay raaci doonaan jadwalka A / B ee maalinlaha ah waxayna geli doonaan fasal kasta oo ku saabsan Schoology inta lagu jiro waqtiga jadwalka ah.
Hawl kasta oo aad fasal ku qabatid looma wareejin doono deegaanka e-waxbarashada. Ardaydu waxay dhammayn doonaan shaqada si ay u muujiyaan aqoontooda koorsada bartilmaameedyada waxbarashada muhiimka ah.
Meeleynta macalimiinta ayaa la dhajin doonaa ka hor kulan kasta oo waxbarasho.
Macallimiinta Dugsiga Sare ee Minnetonka waxay adeegsadaan ilo badan oo dijitaal ah si loogu oggolaado ardayda inay dhex galaan oo ay la falgalaan waxyaabaha koorsada ka kooban:
Meeleynta cilmiga, doodaha, kediska
Buugaagta Dijital ah
Sharax Wax walba
Meelayntu waxay umuuqan kartaa mid kaduwan jawiga elektaroonigga ah, laakiin ardaydu waa inay filayaan inay kaqaybqaataan maadooyinka oo dhammaystiraan shaqooyinka maalin kasta.
Macallimiinta koorso kasta waxay diyaarinayaan qaabab ardayda loo siiyo fursad ay ku muujiyaan waxbarashadooda. Imtixaannadu waa inay la jaanqaadaan waxbarista macallimiintuna waxay ardayda ula xiriiri doonaan shuruudaha qiimeynta.
Ka waran imtixaannadii taagnaa ama shaqadii hore ee soo daahay iyo kuwa maqnaa?
Macallimiintu waxay la xiriiri doonaan habeynta nidaamka imtixaannada iyo maqnaanshaha shaqada. Macallimiintu waxay fahansan yihiin in hannaanka qurxinta ay u muuqan doonaan wax ka duwan oo u baahan dabacsanaan dhammaanteed. Qodobka muhiimka ah ayaa ah inaan kula shaqeyn doonno.
Macallimiintu waxay sii wadi doonaan inay adeegsadaan qaab dhismeedka iyo soo koobid si ay u qiimeeyaan barashada ardayga ayna ugu meeleeyaan buundooyin. Shaqada ardaydu waxay noqon doontaa mid ka tarjumeysa barashada lagama maarmaanka ah ardaydana waxaa laga filayaa inay sii wadaan inay dhammaystiraan meeleynta.
Goorma ayay macallimiintu kula xiriiri doonaan ardayda MHS wixii ku saabsan rajooyinka elektaroonigga ah?
Macallimiintu waxay u isticmaali doonaan maalinta ugu horreysa ee barashada fog fog sidii waqti ay ugu dejiyaan waxyaabaha laga filayo ardayda iyadoo loo marayo Schoology. Tilmaamaha ayaa la bixin doonaa oo ku saabsan waxyaabaha laga filayo deegaankan waxbarasho, ee ku saabsan laakiin aan ku xaddidnayn:
Sidee wax loo weydiiyaa
Waqtiga udiyaarinta macalinka
Goorma ayay ardaydu ka filan karaan jawaab macallimiinta email ama Schoology?
Ardaydu waxay filan karaan inay la xiriiraan macallimiinta inta lagu jiro jadwalkooda fasalka. Ardaydu waxay sidoo kale emayl u diri karaan ama u diri karaan farriinta Schoology macallimiinta wakhti kasta laga bilaabo 8: 00-3: 00.
La-taliyayaasha iyo Shaqaalaha Bulshada ayaa la heli karaa 8:00 subaxnimo ilaa 3:00 galabnimo Ardaydu waa inay marka hore kula soo xiriiraan iyaga oo u soo diraya emayl. Kulamada dabagalka ah ayaa si wada jir ah loo go'aamin doonaa kuwaas oo ka mid noqon kara Google hangout oo ah hab wajiga iyo wejiga isdhexgalka
Macallimiinta waxbarashada gaarka ah ayaa la heli doonaa inta u dhexeysa 8:00 subaxnimo - 3: 00 fiidnimo, iimaylkuna wuxuu sii ahaanayaa habka ugu wanaagsan ee lagula xiriiro iyaga.
Ardayda iyo waalidiinta / dadka ardayda masuulka ka ah waa inay ku codsadaan ballan emayl ahaan. E-maylkaas, xubinta shaqaalaha oo kaashaneysa ardayda (ardayda) iyo waalidiinta / mas'uuliyiinta ayaa go'aamin doona habka ugu wanaagsan ee ballantaan.
Hawlaha iyo Diiwangalinta Ciyaaraha fudud
Fursadaha Caymiska iPad
Tilmaamaha Dejinta iPad
Dhigashada Xisaabta Qado ee Skyward
Booster Xubinnimada Flyer
Buug-sannadeedka (iibsashada khadka tooska ah)
Ogsoonow: Ma jiro liistada sahayda dugsiga ee dugsiga sare. Ardaydu waxay go'aansan karaan qalabka ay ugu baahan yihiin barashada iyo abaabulka. Inta badan shaqada iskuulka waxaa lagu keydin doonaa si dijitaal ah ipadka ipadka. Ardaydu waxay jeclaan karaan inay sitaan stylus si ay qoraal ugu qaataan. Laptops shaqsiyeed waa la soo dhaweynayaa, laakiin looma baahna. Dhammaan ardayda waxaa la siiyaa Ipad.
Haddii aad hayso wax su'aalo ah ama faallooyin ah oo ku saabsan wax kasta oo dib ugu la xiriira dugsiga, fadlan halkan ku soo gudbi.